တစ်ယောက်တည်း မစံဘူး …
တစ်တောလုံး မကြွေသင့်ဘူး …
ရာဇ၀ငင်တွေ သွေးစွန်းကုန်လိမ့်မယ် ….။
Posted in တွေးမိတွေးရာ |2Comments »
ဘယ်သူမှ ရှုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ့်ဖာသာ ရှုပ်မှန်းမသိ ရှုပ်ခဲ့ရင်း….
ကိုယ့်ဖာသာကြိုးတွေ ရှုပ်ခဲ့ရတာ ….
ဒါကို ဘယ်သူက သိခဲ့မှာလဲ
ဂျူးကတော့ သူ့ဝတ္ထုတိုတစ်ခုထဲမှာ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်….
လွယ်လွယ်ကူကူ ဘယ်တော့မှ မထားမိပါစေနဲ့” တဲ့ …
အဲဒီကြိုးကိုပဲ သွားသွားရှုပ်ခဲ့မိတာ …
မရောင်ရာများ ဆီလူးနေမိသလားလို့ ….
ပိတောက်ပွင့်သစ်ကဗျာရှည်စုစည်းမှု၊ ကြည်ဇော်အေး၊ ကိုတာ၊ ကြည်အေး၊ နောက် … တစ်ယောက်ယောက် ….
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် လောကကြီးကို ကျေးဇူးတင်နေရတာပဲ..
Jumper နှစ်ရက်လောက် ဖြစ်ခွင့်ရချင်တယ် …
တစ်သက်လုံး မကြိုက်ခဲ့တဲ့ ထမင်းကြော် …
ဘယ်သူ့ကို သနားရမှန်း သိပါဝူး…
ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ …
အဖိုးရှိစဉ်တုန်းက နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ …
လူတစ်ဖက်သားကို အမနာပ ပြောတတ်တဲ့သူတွေ.. (အဲလိုလူတွေ သိပ်ပြီးမုန်း)
သက်မဲ့ …. ????
သက်ရှိ ….. မေမေ၊ မမချို၊ နောက်….. သူတို့လို ထပ်တူထပ်မျှချစ်တဲ့ အစ်မတစ်ယောက် …
အလုပ်မတွင်တဲ့ ကြိုးနီစနစ် …
တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် …
ချစ်သောသူများ ကျန်းမာပါစေ …
မးးးးးးးးး က tag လို့ ရေးတာပါ …
အခုတလော ဖေဖေ့ကို သတိရနေတယ်။ ဖေဖေနဲ့ မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာနေပြီပဲ။ ကြာဆို နှစ်တွေက လက်တစ်ဖက်မကလို့ လက်နှစ်ဖက်တောင် ရှိနေပြီ။ ဖေဖေ နေကောကောင်းရဲ့လား။ အဆင်ကောပြေရဲ့လား။ အခုဆိုရင် ဖေဖေက ဘယ်လို ပုံစံရှိနေလဲ မသိပါဘူး။ ပိန်သလား။ ၀သလား။ သိတော့ သိချင်သား။
ဖေဖေနဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ အခေါက်က ဒီလိုပဲ မိုးရာသီ ထင်ပါရဲ့။ တွေ့တဲ့ရက်က မများတော့ သိပ်တောင် မမှတ်မိပါဘူး။ ၂ ရက်လား ၃ရက်လားပဲ ရှိတယ်ဆိုတော့ ဝေေ၀၀ါးဝါးနဲ့။ အဲ့တုန်းကတော့ ပျော်ခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်။
ဖေဖေ ၀ယ်ပေးတဲ့ နာရီလေးတော့ ရှိသေးတယ်။ အမှတ်တရသိမ်းထားတာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနာရီကို မပတ်ဘူးဆိုတာ သိရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မလား မသိဘူးပဲ။ နာရီမှ မကြိုက်တာ ဖေဖေရာ။ မပတ်ချင်ပါဘူး။ အဲဒီနာရီကို မပတ်ပေမယ့် ဖေဖေ၀ယ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းအဖြစ် သေသေချာချာသိမ်းထားပါတယ်။ မေမေကတောင် မျက်နှာမကောင်းဘူး။
ပြီးတာ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖေဖေ ၀ယ်ပေးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ဖေဖေ့ လက်မှတ်ထိုးထားတယ်လေ။
သမီးကြီး ……… နဲ့
သမီးငယ် … တို့ အင်္ဂလိပ်စာ ထူးချွန်ဖို့ … ဖေဖေ ဆိုပြီးလေ။ စိတ်တော့ မကောင်းပါဘူး.. ဖေဖေရာ။ ဖေဖေက အင်္ဂလိပ်စာ တော်စေချင်ပေမယ့် ဖေဖေ့သားသမီးတွေက ညံတယ် ဖေဖေရ။
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဖေဖေရာ.. သူများမိသားစုတွေ စုံစုံလင်လင်နဲ့ ပျော်ရွှင်နေတာကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းလိုက်တာ။ ကိုယ့်စီမှာက အဲလို ပျော်ရွှင်ခွင့်တွေ မရှိခဲ့ဘူးကော။ ဖေဖေနဲ့ မေမေ ချစ်ကြည်နေတုန်းကတော့ ပျော်စရာကောင်းခဲ့မှာပါ။ အရမ်းငယ်သေးတဲ့ အချိန်ဆိုတော့လည်း မမှတ်မိပါဘူး။ ဘော်ဒါဆောင်က ဆရာမကတော့ ပြောပါတယ်။ မိသားစုက ကြည်နူးစရာလေးတဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်တွေကို မမှတ်မိတာ ခက်တယ်။ အခုတော့လည်း မိသားစုဝင်တွေအားလုံးက တစ်နေရာစီမှာ တစ်ဘ၀စီ ရှင်သန်နေကြရတယ်။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်တင်စရာအကြောင်းတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလွမ်းပြေကြည့်စရာ မိသားစုဓာတ်ပုံလေးတောင် ဟုတ်တိပတ်တိ မရှိတာတော့ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းလိုက်တာ။
လူတိုင်း(မိသားစုတိုင်း)မှာ ၀မ်းနည်းမှုက ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်နော်။ ဘယ်သူကမှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို မပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးထင်တယ်။
ဖေဖေ့ကို သတိရနေသလို ကိုကို့ကို လည်း သတိရနေမိတယ်။ ကိုကို လူ့လောကထဲက ထွက်ခွာသွားတာ အခုဆိုရင် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုရှိနေပြီ။ ကိုကိုက အဝေးတစ်နေရာကနေ ထွက်သွားတာဆိုတော့ အခုအချိန်အထိ အိပ်မက်လိုပါပဲ။ ခရီးထွက်နေတယ်လို့ပဲ ခံစားနေရတယ်။ တစ်နေ့နေ့ကျရင် ပြန်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်နေမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟုတ်မှမဟုတ်တာ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုကို ဂစ်တာတီးပြီး ဆိုပြတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ခဏခဏ နားထောင်နေမိတယ်။ ကိုကို့ကို သတိရလိုက်တာ။ မောင်နှမတွေလည်း အတူတူ ကောင်းကောင်း မနေလိုက်ရဘူး။ ကိုကိုက အစောကြီး နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတယ်။
အခုအချိန်မှာ အရမ်းဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုက ဖေဖေနဲ့ အတူတူနေချင်တယ်။ အကြာကြီး နေခွင့်မရဘူးဆိုရင်တောင် ၂လ ၃လလောက် နေခွင့်ရရင်တော်ပါပြီ။ ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။ ပျော်စရာလည်း ကောင်းမှာပဲ။ ဖေဖေက စာဖတ်ဝါသနာပါတယ် ဆိုတော့ သားအဖနှစ် စာအုပ်ဆိုင် အတူတူသွားပြီး စာအုပ်တွေ ရှာမယ်။ ပြီးတော့ ဖတ်ပြီးတဲ့ စာတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးမယ်။ ငြင်းခုံကြမယ်။ ရုပ်ရှင်လည်း တူတူကြည့်ကြမယ်။ ကောင်းလိုက်တာ။ ပျော်စရာကြီး။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာ ဖေဖေက ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ကို ရောက်နေမှန်းမသိဘူး။ တွေ့ကော တွေ့ခွင့်ရှိပါဦးမလား မသိပါဘူး။
အခုနေများ တန်ခိုးရှင်တစ်ဦးက လိုရာဆန္ဒတောင်းဆိုရင် ဒီဆုတစ်ခုကိုတော့ ပြည့်ချင်ပါတယ်…
ကြယ်လေးတစ်ပွင့် ငါ့ကောင်းကင်မှာ ခုန်ဆင်းကြွေကျခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီနေ့ကို ငါ မေ့လို့မရဘူး။ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်နေတဲ့ ဘ၀ရဲ့ သီအိုရီတွေထဲမှာ ခဏတာ ဆင်းသက်လာတဲ့ ကြယ်ပွင့်လေး ကြောင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကို ငါ … ယာယီပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရခဲ့တယ်။
မင်း… ထားရစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ကိုယ်တိတ်တိတ်လေး နေခဲ့တာပါ။ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုတွေကို မင်း … ပေးတဲ့ အမှတ်တရ လက်ဆောင်အဖြစ် ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ထာဝရ သိမ်းဆည်းထားမှာပါ။ နာကျင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ်ကျေနပ်ပါတယ်။ မင်း.. ပေးခဲ့တဲ့ အင်မတန်နည်းပါးလွန်းတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း(မင်း.. ကိုယ့်ကို အစစ်အမှန် မပေးခဲ့ဘူးလို့ ထင်တာပဲ)တွေကို အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထား နေမှာပါ။ ကိုယ် မင်းကို အရမ်းယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ တန်ဖိုးလည်း ထားခဲ့ပါတယ်။ ပုလဲရတနာလေးတစ်ပါးလို အမြတ်တနိုးကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့် ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ အရာအားလုံးကို ပုံအောပြီး ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပြန်ရလိုက်တဲ့အရာကတော့ …………………………….
ကိုယ်… မင်းကို အပြစ်မတင်ရက်ပါဘူး။ နာကျင်မိတာတော့ အမှန်ပဲ။ နှလုံးသားတစ်ခုလုံး သွေးချင်းချင်းနီမြန်းခဲ့ပြီလေ။ မချိပြုံးလေး ပြုံးရုံကလွဲပြီး ကိုယ်… ဘာမှလည်း မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဝေးကနေ တမ်းတလွမ်းမောခွင့်လေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်လိုက်ရမှာပါ။ မင်းကို.. ပေးဆပ်ခွင့် ရခဲ့အတွက်လည်း အရမ်းပဲ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနေ့ရက်လေးတွေကို ထာဝရထုတ်ပိုး သိမ်းဆည်းထားမှာပါ။
ကိုယ်နဲ့အတူ ရှိနေရင် မင်း … စိတ်အနှောင့်အယှက်အရမ်းဖြစ်တယ်။ မပျော်ရွှင်ဘူးဆိုတာ ကိုယ် သိပါတယ်။ အားနာပါးနာနဲ့ လိုက်လျောဆက်ဆံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုယ် .. နားလည်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း မင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မမေ့နိုင်ဘူးဆိုတာ သိနေတော့လည်း မေ့ပျောက်ဖို့ မကြိုးစားတော့ပါဘူး။ မင်းအတွက် ကိုယ်ဟာ အရေးမပါတဲ့ လူသားတစ်ဦး ဖြစ်နေပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်တော့ မင်းဟာ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ဟိုးးးးးးးးအနက်ရှုင်းဆုံး၊ အမြင့်မြတ်ဆုံး၊ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရာတစ်ပါးပါပဲ။
လူတစ်ယောက်ဆီမှာ ဒီလောက်ထိ ပျော်ဝင်နစ်မျော ကျဆုံးသွားမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးခဲ့မိဘူး။ မင့်းရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး မင့်းရဲ့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုက ကိုယ့်အတွက် အကြီးမားဆုံး သောကဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ မင်း …. နေမကောင်းဘူး၊ စိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပဲ အဲဒီဝေဒနာတွေ၊ သောကတွေကို ယူလို့ရရင် လွှဲပြောင်း ယူပေးချင်ပါတယ်။
နံနက်ခင်းနေရောင်ခြည်နဲ့အတူ နိုးထလာတဲ့ မနက်ခင်းတိုင်းမှာ အဦးဆုံးသတိရမိတာ မင်း…အကြောင်းပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ.. မျက်စိနှစ်ကွင်းပိတ်ပြီး ညအိပ်ရာဝင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း မင်း…အကြောင်းကိုပဲ တွေးတောမိနေတတ်ခဲ့တယ်။
နှစ်ယောက်အတူ လျှောက်ဖူးတဲ့ လမ်းမတွေ၊ အတူထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ကို ဖြတ်လျှောက်မိတိုင်း ကြေကွဲစွာ ပြုံးနေရပြီ။ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိတိုင်း မင်း..ကို သတိရလွမ်းဆွတ်မိနေတတ်ပြီ။
အိပ်မက်လေး မက်နေတုန်းက သာယာကြည်နူးနေပြီး အိပ်မက်က လန့့်နိုးတော့မှ အပျော်တွေ လေနှင်ရာ လွင့်ပါသွားခဲ့ရတယ်။
လူဆိုတာကလည်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိခင်တုန်းက မပိုင်ဆိုင်ရကောင်းလားဆိုတာ မရှိပေမယ့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ဆုံးရှုံးလိုက်တော့မှ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရလေခြင်းဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ … နာကျင်ပင်ပန်းလိုက်တာ။
ကိုယ့် ရင်တွင်းဥယျာဉ်ထဲမှာ အလွမ်းသစ်ပင်လေး ရှင်သန်ကြီးထွားနေလိုက်တာ..ဘယ်တော့မှ မညှိုးခြောက်တော့မယ့် ပုံစံနဲ့။